Qofka jooga deegaankiisa ee aan ka ordin masiibada wuxuu helayaa ajarka qof shahiidey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Markaad cinwaanka akhrido waxaan is odhan kartaa sidee wax u jiraan laakiin waa xadiis dhaba oo ka hadlaya masiibooyinka dhaca sida cudurka hadda aduunyada ku faafay ee Kooro ee halista ah marka uu gaaro sambabada.
Waxa uu ka hadlayaa ajarka uu leeyahay qofka aan ka ordin cudurka ee ku nagaada deegaanka ama dalka uu joogo ee haddana ka badbaaday ajarka uu leeyahay oo u dhigma qof shahiidey oo kale.
Inteena badan shahiid waxaan u naqaanaa qof dagaal ku dhintey oo ALLA dartii u dhintey qaasatan asagoo difaaca diinta RABI sida xilligii uu noolaa rasuulkeena CSW.
Haddaba waa maxay shuruudaha xadiiska
Xadiiska waxa ka soo werisay rasuulkeena CSW xaaskiisa Caasha (rc) waxana xadiisku leeyahay Qofkii ku nagaada gurigiisa ama deegaankiisa xilli ay dilaacdo masiibo sida Kooro oo kale waqtigeena ee la yimaada SADEX arimood oo kala ah 1- SAMIR 2-Ajar uu ka rajaynayo ALLE 3-Yaqiinsan inay ku dhacayaan KELIYA wixii RABI u qorey, waxa rasuulkeena CSW laga soo wariyay in qofkaasi helayo AJARKA qof shahiidey.
Caalimka weyn ee Ibnu Xajar Alle u naxariistee oo sii fasiraya xadiiska rasuulka CSW ayaa yiri Xataa haddii qofku ka badbaado masiibada oo sadexdaa arimood ee kore aaminsan yahay wuxuu helayaa WELLI ajarka qofka shahiidey.
RABI ha inaga dhigo kuwii ku sugnaada sadexdaa arimood ee xadiiska rasuulkeenu tilmaamayo. Aan noqono kuwii had iyo jeer ku xirnaada RABIGEENA ogna QADARKA RABI, Samir buuxa la yimaada, RABINA ka rajaynaya AJAR.